Akụkọ - Mgbe ha nọrọ na ụlọ ọrụ silicone ruo ogologo oge, ọtụtụ ndị ahịa ga-anụ ajụjụ a: ngwaahịa silicone nwere otu nha ma ọ bụ ọbụna otu ụdị ahụ nwere ọnụahịa dị iche iche.
Mgbe ha nọrọ na ụlọ ọrụ silicone ruo ogologo oge, ọtụtụ ndị ahịa ga-anụ ajụjụ a: ngwaahịa silicone nwere otu nha ma ọ bụ ọbụna otu ụdị ahụ nwere ọnụahịa dị iche iche.
Mgbe ha nọrọ na ụlọ ọrụ silicone ruo ogologo oge, ọtụtụ ndị ahịa ga-anụ ajụjụ a: ngwaahịa silicone nwere otu nha ma ọ bụ ọbụna otu ụdị ahụ nwere ọnụahịa dị iche iche. N'okwu a, ọ dịbu
Esịt ama afịna mi ke esisịt ini. Iji dozie nsogbu a, na mgbakwunye na ịmụ ihe site n'aka ndị bu m ụzọ na ụlọ ọrụ ahụ, azụrụ m ngwaahịa silicone nke ọnụahịa dị iche, ndị nrụpụta, na mpaghara maka ntụnyere.
Taa, m ga-enye gị nkọwa dị mfe banyere ụlọ ọrụ anyị’Ngwaahịa s, na-enwe olileanya inyere gị aka ịmatakwu ụlọ ọrụ ngwaahịa silicone.
1. Na usoro nke ihe: industriesfọdụ ọrụ pụrụ iche nwere ụfọdụ njirimara chọrọ maka ngwaahịa silicone. Dịka ọmụmaatụ, ọnụahịa nke ngwaahịa silicone nke ihu igwe na ngwaahịa nkịtị silicone dị iche.
2. Nhazi usoro: silfọdụ gel silica yiri nke ahụ n'èzí, mana nha ya dị iche iche nwere ike ịdị iche, usoro ahụ dịkwa mgbagwoju anya, nke ga-emetụta mmepụta mmepụta, yabụ ọnụahịa ahụ abụghị otu.
3. Usoro: Di iche iche nke usoro mmeputa nke ihe ndi silicone ga emetuta onu ahia. Dị ka silk ebi akwụkwọ, mpịakọta obibi, thermal nyefe, wdg n'oge mmepụta
4. Ebu: Ọnụ ọgụgụ nke oghere na ebu ngwaahịa ga-emetụta ikike mmepụta. Naanị mgbe ndị ahịa ina na ọnụ ọgụgụ nke oghere na ebu iru a ezi uche ruru, nwere ike na-akwụ ụgwọ na-ebelata na-eri-irè nke ahaziri silicone ngwaahịa nwere ike mma.
5. Chọrọ: Maka otu ngwaahịa ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ahaziri iche, ibu ọnụ ahịa ga-adịkwu mma.
Site na nke dị n'elu, enwere ike ịhụ na ọnụahịa nke ngwaahịa silicone nke yiri otu agaghị abụ otu. O metụtara akụrụngwa eji, nhazi Ọdịdị, teknụzụ ngwaahịa, ọnụọgụ ebu na usoro ọtụtụ.
Ya mere, a na-atụ aro ka ndị ahịa chọpụta ọdịnaya ndị a tupu hazie ngwaahịa ahụ, wee kwado onye nrụpụta ahụ. Zhongsheng Silicone na-anabata ndị ahịa niile ka ha hazie, ọ bụrụhaala na ịchọrọ, anyị na-anọ ebe ahụ mgbe niile.